Counselling Corner Myanmar - Counselling Corner မှသတင်းစာ
Counselling Corner မှသတင်းစာ
Posted on မေ 17, 2021 မေ 17, 2021 | မှတ်ချက်များ မရှိပါ။
ကျွန်တော်တို့ Counselling Cornerသည် မြန်မာပြည်တွင်း၌ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိအမြင်များနှင့် စိတ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အသိအမြင်များ တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဤပုံမှန် သတင်းစာကို ထုတ်ဝေခဲ့ ပါသည်။
ဤသတင်းစာသည် အလုပ်ခွင်အတွင်းရှိ လူတို့၏စိတ်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူများစွာ ပြုလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ‌ ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ လူမှုပတ်၀န်းကျင်မှာရှိတဲ့ ထူးဆန်းစွာပြုမူတတ်သူတွေ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဖယ်ကျဉ်ကာ နေထိုင် တတ်သူတွေ အတွက်သာမက လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်းမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးသောအချက် အချို့ မျှဝေပေးခြင်း သာမက လက်ရှိဆောင် ရွက်နေသော အလုပ် အများစုမှာ အခမဲ့လုပ်ဆောင်ပေး လျက် ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ ( အချို့သော အဖွဲ့အစည်းများကိုသာ အခကြေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။) သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်တော်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်တကွ အချက်အလက်များအား သင်၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် အားလုံးအား မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် လူတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး အပေါ် အသိအမြင်များကို ပြောင်းလဲပေး နိုင် မယ် လို့ မျှော် လင့် မိပါတယ်။
Facebook ဆိုရှယ် မီဒီယာ ‌ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် Live လွှင့်ခြင်း
Counselling Cornerကို တည်ထောင်သူ ဦးအောင်မင်းသိန်းမှ ဦးဆောင်၍
အင်တာနက်နှင့် ဆိုရှယ် မီဒီယာများပေါ်မှ အမုန်းစကားများဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုများ၊
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း အိမ်တွင်း အကြမ်းဖက်မှု များ၊
မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခြင်း အစရှိသော အတွေးများအတွက်
မတူကွဲပြားသော ခေါင်းစဉ်များဖြင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွင့်ခြင်း (Live)အစီအစဥ်ကို အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့ ညနေ(၇)နာရီတိုင်းတွင် Counselling Corner Facebook Page ထုတ်လွှင့် နေပါတယ်ခင်ဗျ။
ယခုအချိန်နှင့်အနီးစပ်ဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့တာကတော့ ကိုသားငယ်(Musician and Singing Coach)မှ သူ၏ဘ၀အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်ကာ အတိတ်မှစိတ်ခံစားချက်ဆိုးရွားချိန်တွင် ဘယ်လို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာလဲဆိုတာ ကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ Tuesday Live Program အတွက် ကျွန်တော်တို့ Counselling Corner Facebook Pageအား Follow လုပ်ခဲ့၍ စောင့်ကြည့်နိုင် ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကိုသားငယ် နှင့် တိုက် ရိုက် ထုတ် လွှင့် ခြင်း ကို ကြည့် ရှု ရန်
“မြန်မာနိုင်ငံသားများသည် အခြားနိုင်ငံသားသူများထက် Covid-19ကာလကိုရင်ဆိုင်ရန် ပို၍ ခံနိုင်ရည်ရှိသလား?
Counselling Corner ရဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ(workshop)ကို လေ့လာကြည့်ပါ။”
အထူးသဖြင့် ဒီ“Covid”ကာလမှာ (အိမ်၌ ဖြစ်စေ၊ ရုံးတွင်းအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ) company အဖွဲ့အစည်းတွေက ဝန်ထမ်းမျတွေ ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့များ လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို ပြဿနာတွေ အတွက် Counselling Corner မှ အချိန်(၂)နာရီကြာ လူအယောက်(၂၀)ပါ၀င်နိုင် တဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (workshop)များကို November,2020 ဒုတိယအပတ်မှစတင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ဤဆွေးနွေးပွဲတွင် ပါဝင် သူတွေရဲ့ စကားပြောဆိုခွင့်နှင့် ခံစားချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် အလေးထား ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် သင်တန်းသားများကို ဘာလုပ်သင့်သည် ပြောရန်မဟုတ်ဘဲ အလုပ်အတွင်း ဝန်ထမ်းများရဲ့ အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းကိုဖန်တီးနိုင်ရန်၊ လူမှုဆက်ဆံရေးများအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အတွက် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
“Counselling Corner”၏ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများမှ ပြန်လည်ရရှိလာသော သုံးသပ်ချက်များ မှာ အလွန်စိတ်၀င်စားဖွယ်ရာဖြစ်ပြီး သင်တန်းသားများသည် ဆွေးနွေးမှုများကို အလွန်နှစ်သက်လာ ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ခင်ဗျာ။
“ကျွန်ုပ်တစ်ဦးတည်းသာ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြတ်သန်းနေရခြင်း မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ပြဿနာဖြေရှင်း ဖို့ အတွက် နည်းလမ်းတွေအားလုံးဟာ အလွန်အားရကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းပါတယ်” ဆိုပြီးထောက်ခံချက်တွေ ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အချိန်(၂)နာရီကြာ ZOOMဖြင့်ပြုလုပ်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက် ခြင်းအားဖြင့် ဝန်ထမ်းများရဲ့ အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်တွေ အလွန် တိုးတက်လာသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါ သည်။ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးလျှင် ကုန်ကျငွေမှာ (၂၂,၅၀၀)ကျပ်သာ ရှိပါသည်။ နောက်ထပ်အ‌သေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိလိုလျှင် ဖုန်းနံပါတ် – 09 664017251 ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အားလပ်ရက် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအစီအစဥ်များနှင့် စိတ်ထိခိုက်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းအပေါ် အကြံဉာဏ် (၆) ချက်။
ရန်ကုန်သည် အိမ်တွင်းနေထိုင်ရန် အမိန့်ချမှတ်ထားဆဲဖြစ်၍ ခရစ်စမတ်ကာလနှင့်နှစ်သစ် ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားများသည် ယခင်ကကဲ့သို့ လူစုလူ​၀ေးဖြင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ သို့ဖြစ်၍ ဤကာလသည် ပြည်သူများအတွက် အလွန်ပင်စိတ်ကသိကအောက်နိုင်သော ကာလများ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။ လက်တွေ့ကျခြင်းနှင့် ဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ကြိုတင်၍ လက်ခံထားခြင်း၊ အခြားသောသူများထံမှ အကူအညီရယူရန်အတွက် ကြိုတင်စီစဥ်ထားခြင်းသည်ပင် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း ကိုရှောင်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦး ဖြစ်သည့် မစင်ဒီ ရေးသားထားသော စာစဥ်ကို ဤတွင် ဆက်လက်ဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးချင်းအကြံပေးခြင်း (Individual therapy) ဘယ်အချိန်မှာလိုအပ်လဲ?
တစ်ခါတစ်ရံ မိမိ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးဦးတွင် စိတ်ဖိစီးမှုသော်လည်းကောင်း၊ အလုပ်အပေါ်တွင် အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်တကွ အလွန်အမင်းစိတ်ဓါတ်ကျခြင်းသာမက အစားအသောက် မမှန်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ခြင်းစသော ပြဿနာများရှိနိုင်သည်။
ထိုသို့သော ပြဿနာများသည် အိမ် သို့မဟုတ် အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကြောင့် ရရှိခဲ့သော အတိတ်မှ ဆိုးရွားသော စိတ်ဒဏ်ရာများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် စိတ်ခံစားချက်မကောင်းခြင်းစသော ခံစားမှုများသည် လူတိုင်း လူတိုင်းတွင် ဖြစ်နိုင် ပါသည်။ ၎င်းသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်အား စိတ်မနှံ့ခြင်းဟု ဆိုလိုခြင်း(လူအများထင်သကဲ့သို့) မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်စိတ်အခြေအနေအဆင်မပြေခြင်းသည် ကုစားနိုင်သည့် အရာတစ်ခုပင် ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော်တို့ Counsellor များမှ Client များအပေါ် သူတို့၏ ပြောဆိုသော အရာများကို နားထောင် ခြင်း၊ ထိုအရာများအပေါ်တွင် ပြန်လည်၍ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း သဘောတရားများဖြင့် Clientsသည် မိမိ ကိုယ်ကို ပြန်မြင်နိုင်ပြီး ရိုးရှင်းလှသော လုပ်ဆောင်ချက်များ အပေါ်တွင် အရည်အချင်း သာမက အတွေ့ အကြုံပြည့်ဝသော Counnsellorများ၏ နည်းလမ်းများဖြင့် sessionsများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုခံယူခြင်းများသည် ခက်ခဲသော အခြေအနေများကို ကျော်လွှားခြင်း သာ ဖြစ်၍ ကြောက်စရာကောင်းသော ရှက်စရာကောင်းသောအရာ တစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း သိရှိရ ပေမည်။
ဘိုကလေးဈေးလမ်းထဲရှိ ကျွန်တော်တို့ Counselling Corner ရုံးခန်းအသစ်တွင် လက်ရှိ Counsellors လေးယောက်မှာ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဖြစ်စေ၊ ရုံးခန်း အတွင်းတွင် ဖြစ်စေ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် သာမက ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာရေး(Covid – 19အတွက် လိုအပ်သော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ) အတွက်ပါ စည်းကမ်းများကို စနစ်တကျ လိုက်နာကာ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။
Counselling session မှာ clients မှ စိတ်လိုလားစွာ ဆောက်ရွက်ချင်စိတ်ရှိမှသာ Counsellor နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Counsellorသည် Clientနှင့် ပထမဆုံးအချိန် ဆွေးနွေး ပြီးသည့်နောက်တွင် Client အား မည်သို့ ရှေ့ဆက်သွားမည်နှင့် မည်မျှရှေ့ဆက်သွားမည်ဟူသော အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးလေ့ရှိပါသည်။
အကယ်၍ မိမိတို့ အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် မိမိတို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးဦးအား ယခုကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံရန် ပြောပြခြင်းငှာ အခွင့်အရေးမရရှိခြင်း၊ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် သွားရောက်ရန် ပြောဆိုခြင်းငှာ မတတ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook Pageမှ သော် လည်းကောင်း၊ Websiteတွင် လည်းကောင်း ကြည့်ရှုရန် အကြံပေးခြင်းစသော အကူအညီများ ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထိုသူကိုယ်တိုင် လေ့လာခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီနိုင်သည်များရှိပါက သူကိုယ်တိုင် ဆက်သွယ်နိုင်စေရန်အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းရအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်တော်တို့၏ Facebook Page များမှ အကြောင်းအရာများနှင့် Live တိုက်ရိုက်ထုတ် လွှင့်မှုများအပေါ်တွင် မေးခွန်းများသာမက အခြားသော အကြံဥာဏ်များကို ကျွန်တော်တို့ Counelling Corner Facebook Page Messengerမှ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ကြောင်းနှင့် ဝေဖန်ချက်များကိုလည်း ကြိုဆိုပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ် ခင်ဗျ။
အခြားသော ကျွန်တော်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ကျွန်တော်တို့ Counselling Corner မှ မိမိတို့ စိတ်ခံစားမှုများကို ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုစေနိုင်ရန် နှင့် မိမိတို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းတွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိသညာများ သာမက ပွင့် လင်းစွာဖြင့် မိမိတို့ ပြဿနာများကို ဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုစေနိုင်ရေးအတွက် အကောင်းဆုံးအကူအညီများ ပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ် ခင်ဗျ ။
← What to expect from Counselling…
Counselling Corner newsletter (June 2021) →